सिक्स प्याक कसरी बनाउने ? « Karobar Aja
सिक्स प्याक कसरी बनाउने ?
deepshikha Sharma प्रकाशित मिति : 12 November, 2017
दस्तावेज,कार्तिक २६ गते आईतवार , २०७४ – शरीरलाई आकर्षक देखाउन फिट्नेस सेन्टर धाउने युवा जमात बढ्दो छ । तर, जो फिट्नेस सेन्टर वा घरमै बसेर पनि नियमित व्यायाम गरेर आफ्नो शरीर सुन्दर बनाउन खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई सही परामर्श दिने फिट्नेस गुरुको भने अभाव छ । जिम सेन्टर गएर बढीभन्दा बढी तौल उचाल्ने शारीरिक अभ्यास गर्न थालेपछि एकाएक शरीरमा सिक्स प्याक देखापर्न थाल्छ भन्ने भ्रम धेरैमा पाइन्छ । तर, आफ्नो शरीरको अवस्था, उमेर, उचाइ आदिका बारेमा पर्याप्त जानकारीविना र दक्ष फिट्नेस गुरुविना जति नै धेरै तौल उचाले पनि शरीर राम्रो बन्दैन । फिट्नेस सेन्टर जानुभन्दा पहिला आफ्नो शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्छ ।
मानिसको शरीर तीन प्रकारको हुन्छ– एक्टोमर्फ, मेसोमर्फ र एन्डोमर्फ । एक्टोमर्फ टाइपको शरीर हुनेहरू दुब्ला हुन्छन् र उनीहरूको शरीरको हड्डी पनि सानो हुन्छ । यस्ता शरीर भएकाहरूले फिट्नेस सेन्टर ज्वाइन गर्नुअघि तौल बढाउने डाइट खानुपर्ने हुन्छ । शरीरमा चाहिने जति तौल भएन भने जिम गरेरमात्र शरीर आकर्षक देखिँदैन । त्यसैले दुब्ला व्यक्तिले जिम जानुभन्दा अघि फिट्नेस एक्सपर्टसँग परामर्श गरेर कति तौल बढाउने र शारीरिक अभ्यास कहाँबाट सुरु गर्ने निधो गर्नुपर्छ ।
मेसोमर्फ टाइपको शरीर हुनेहरूको हड्डी ठूलो हुन्छ । बनावटको हिसाबले यस्तो शरीर भएकालाई आकर्षक मान्छेको सूचिमा राखिन्छ । यस्तो शरीर भएकाले थोरै मेहनत गरेर पनि आफ्नो शरीर आकर्षक बनाउन सक्छन् । न साह्रै दुब्लो र न साह्रै मोटो हुने भएकाले शरीरिक व्यायाम गर्दा यस्तो टाइपका शरीर हुनेहरूमा रिजल्ट चाँडै देखिन्छ ।
एन्डोमर्फ टाइपका शरीर हुनेहरू मोटा र शरीरमा बोसोको मात्र बढी भएका हुन्छन् । शरीरको फ्रेम ठूलो हुन्छ । तौल पहिला नै बढी हुने भएकाले तौल बढाउने जरुरत पर्दैन । यस्ता शरीर भएकाले निकै मेहनत गरेपछि मात्र शरीर आकर्षक बनाउन सक्छन् ।
फिट्नेसका लागि जिम जानेहरूलाई सुरुमै धेरै तौल उचाल्न लगाएर जिम बलियाहरूले मात्रै गर्ने शारीरिक अभ्यास हो भन्ने भ्रम दिने गरिएको छ । जसले गर्दा शरीर फिट बनाउन चाहने धेरै मानिस फिट्नेस सेन्टर तथा जिम सेन्टर जान डराउने गरेका छन् । फिट्नेस सेन्टर ज्वाइन गर्ने जो कोहीलाई पनि सुरुमा वेट ट्रेनिङ दिनुपर्छ । कम तौल उठाउन लगाएर बिस्तारै तौल बढाउँदै लैजानुपर्छ । फिजिकल अभ्यास गराउनुपर्छ । जिम भन्नेबित्तिकै एकैचोटि ठूलठूला फलाम उचालेर शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि फिट्नेसको ज्ञान भएको प्रशिक्षकले सही सल्लाह दिन जरुरी छ ।
फिट्नेस भन्नेबित्तिकै सामान्यतयाः हामी सबैले शारीरिक बनावट तन्दुरुस्त राख्ने भन्ने बुझ्छौँ । तर, शारीरिक व्यायामले मानसिक तथा अत्मविश्वासको तह पनि बढाउँछ । व्यायाम शारीरिक सुगठनका लागि मात्र गरिँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । । शरीर र मनलाई स्फूर्त राख्ने हामीले शारीरिक व्यायामका लागि केही समय छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । हरेक दिन थोरै समय शारीरिक व्यायाम गर्दा शरीर, मन र दिमाग स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्छ ।